Okuhlangenwe nakho kwehlathi elishisayo e-Maya Beach - I-Airbnb
Okuhlangenwe nakho kwehlathi elishisayo e-Maya Beach
Izwa impilo yasehlathini khona e-Maya Beach ngenkathi uhlezi engadini eshisayo ujabulela isiphuzo. Ifulethi lingelesimanjemanje futhi linombhede ongu-1/ibhavu eli-1 nekhishi elihlome ngokuphelele futhi line-A/C.
Uyemukelwa kuma-Simberts Apartments e-Maya Beach! Hlanganisa impilo yasehlathini nokuphumula kolwandle phakathi nohambo lwemizuzu emi-2!
Ngena endaweni eseceleni kwechibi eMaya Beach futhi ujabulele impilo yasehlathini khona lapha. Hlala engadini futhi ubuke izilwane ezinjengoxam, ama-agouti, ama-raccoon anobungane, nenqwaba yezinyoni ezinjengopholi ne-chachalaca. Hamba engadini yasezindaweni ezishisayo ubone ama-orchid aqhakazayo, ama-epiphyte, ukhokhovula nezihlahla zikakhukhunathi noma izihlahla ze-soursop.
Ifulethi elinombhede ongu-1 nokugeza oku-1 libanzi kakhulu (amafidi-skwele angama-465). Ikhishi lihlome ngokuphelele nge-microwave, umenzi wekhofi, i-toaster, izinto zokupheka, isiqandisi esiwusayizi ogcwele, nesitofu esinohhavini. Ngeke ube nenkinga nhlobo yokulungisa ukudla ngenkathi ulapha! Hlala kusofa othokomele futhi ubukele i-TV yekhebula (zonke iziteshi ezinkulu zase-US) I-inthanethi engenantambo iyatholakala, ngakho kuzoba lula ukuxhumana nabantu obathandayo ngenkathi ulapha.
Hlalani ndawonye endaweni yokudlela yasekuseni ukuze nijabulele ukudla kwasekuseni okusheshayo kwezithelo zasezindaweni ezishisayo noma isidlo sakusihlwa esiphekwe ekhaya esinezithako zasendaweni. Ungakwazi futhi ukudla ngaphandle ngenkathi ubuka imvelo ephilayo ikakhulukazi lapho kuhwalala.
Igumbi lokulala linombhede olingana nendlovukazi onethezekile futhi uzoba nesitoreji esiningi sempahla yakho yeholide eshisayo. Igumbi lokulala line-A/C futhi ngomqondo ovulekile, ungajabulela umoya opholile kulo lonke ifulethi.
Igumbi lokugezela elineshawa enamathayela kanye nesitoreji esiningi futhi linomfutho wamanzi omkhulu namanzi amaningi ashisayo.
Ulwandle luqhele ngemizuzu emibili nje. Ifulethi lisendaweni ekahle enhliziyweni yeMaya Beach, eduze nezindawo zokudlela namabha kanye nesitolo esikhulu.
Lungela uhambo lwakho lwasehlathini khona lapha e-Maya Beach futhi ubone zonke izilwane eduze.
Impahla itholakala endaweni enhle ye-de-sac. Inezihlahla ezinkulu zendawo, ezinikeza umthunzi omningi. Ungakwazi ukuhamba uye ogwini oluseduze noma izindawo zokudlela eziseduze kakhulu.
..... Okuncane noma okuningi ngokuthanda kwakho.
Sihlala endaweni efanayo futhi sijabule kakhulu ukukusiza ukuhlela uhambo lwakho, ukuphendula yonke imibuzo yakho nge-Belize/Placencia, njll.